1. Khaladaadka hawlgalka Cadaadiska duritaanka biyuhu wuu sarreeyaa saamayntiisuna waa weyn tahay, oo tubbada birta dhalada ah ma saamayn karto culeysku. Ka dib markii la isticmaalay, hawlwadeenkii ayaa si khalad ah u rogay hawshii oo cadaadiskii qabtay, hawlgalkiina wuxuu ahaa mid aan dheelitirnayn, kaas oo sababi lahaa daadinta ...
Geedi socodka dabaysha waa in uu ahaadaa mid ka mid ah geeddi -socodka wax -soo -saarka oo ka kooban matrix. Waxaa jira saddex qaab oo waaweyn oo loo leexdo, dabaysha dabaysha, dabaysha diyaaradda iyo dabaysha isdaba -joogga. Saddexda hab waxay leeyihiin astaamo u gaar ah, iyo habka qaloocinta qoyan waa tan ugu badan ee la isticmaalo sababta oo ah rel ...
1. Saamaynta ay Cl-ku leedahay daxalka biraha ayaa ka muuqda laba dhinac: mid waa in la yareeyo suurtagalnimada samaynta filim dheef-shiid kiimikaad dusha sare ee maaddada ama in la dardargeliyo burburinta filimka gudbinta, si kor loogu qaado daxalka deegaanka; dhanka kale, waxay yareysaa solubi ...